thinzar's blog: Doodles မှ စိတ်နေစိတ်ထား ခန့်မှန်းခြင်း
မျဉ်းကြောင်းတွေ အပေါ်အောက်ဆင်ပြီး ဂျစ်ဂျစ်နဲ ့ခြစ်ကြသွားတာကြတော့ရော? ပျင်းနေရင်ဖြစ်ဖြစ်။ စိတ်ရှုတ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ် မျဉ်းတွေဆွဲနေတတ်တယ်။ sketch ခြစ်သလိုမျိုးလေ။
10/3/09 8:49 PM
Wow...Nice....I also used to do that but mine is circles and stars and so on.....
10/3/09 11:26 PM
တခုခုရေးပြီးရင် ဘောလ်ပင်နဲ့ ဝိုင်းဝိုင်းထားတတ်တယ်
စိတ်အတက်အကျပေါ်မူတည်ပြီး ဆွဲတဲ့ပုံတွေကတော့ ပြောင်းနေမှာပါ
11/3/09 2:00 AM
အိမ်ပုံလေးတွေ ဆွဲလေ့ရှိပါတယ်.. အထူးသဖြင့် အမိုးလှလှလေးတွေ နဲ့ ဆွဲရတာ သဘောကျတယ်။
12/3/09 9:06 AM
13/3/09 1:09 AM
စိတ်အရမ်းဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲ။ မှန်လဲမှန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဝေမျှတာကျေးဇူးပါ။
13/3/09 1:48 PM
15/3/09 10:20 PM
မThinzar ရေ ဟိုတစ်ခေါက်ကော့မန့်ထဲက ပြန်လိုက်လာပြီး နှုတ်ဆက်ဖို့ပါပဲ ဝင်လို့မရဖြစ်နေလို့ဗျ။ စာလာဖတ်ပြီး ကော့မန့်ပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။ စီဘောက်မတွေ့လို့ ကော့မန့်မှာပဲ လာပြန်ရေးသွားပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေခင်ဗျာ
16/3/09 12:27 AM
လင်း>> artistic, patient တဲ့။
Harun>> the geometric shape says you has rational way of thinking. But I would interpret that you were not concentrated in class and day-dreaming :D
ကိုဇနိ>> နောက်ဆို စာအုပ်မှာ အဝိုင်းတွေနဲ့ ပြည့်သွားလား။ သဉ္ဖာဆို ဝိုင်းလိုက် လေးထောင့်နဲ့ ခတ်လိုက်နဲ့ ပြီးရင် ဘာမှ ပြန်ရှာလို့ မရတော့ဘူး။
ThuHninSee>> အိမ်ပုံလှလှ လေးတွေ ဆွဲတယ်ဆိုတော့ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝရှိလို့ပေါ့။ ပြောင်ချော်ချော်ပုံကတော့ ဂေါက်တာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဆွဲတဲ့သူက ဟာသဉာဏ် ရှိတဲ့သူ၊ လက်ရှိ ပျော်နေတဲ့သူဖြစ်လို့ပါတဲ့ကွယ်။
မအိမ့်ချမ်းမြေ့>> စိတ်ခံစားမှုအခံတစ်ခုခုကြောင့် လက်က ဆွဲဖြစ်သွားတာဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိ စိတ်နေစိတ်ထားကို ထင်ဟပ်သွားတာလို့ ထင်တာဘဲ
မခင်ဦးမေ>> မဆွဲဖြစ်တော့ စာအုပ် မညစ်ပတ်ဘူးပေါ့။ အစ်မအတွက် "ဘလော့ဂ်ကို ကြည့်ပြီး စိတ်နေစိတ်ထား ခန့်မှန်းခြင်း" ဆိုတာ ရေးဦးမယ်။ :D
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ >> စာတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလို့ မကြာခဏ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ တောင်ကြီး အင်းလေး အကြောင်းတွေ့တော့ ကောမန့်မပေးဘဲ မနေနိုင်တော့ဘူး။
16/3/09 5:39 PM
မလုကတော့ ပန်းပွင့်လေးတွေ ဆွဲဖြစ်တယ်
ဘာပန်းမှန်းတော့ မသိဘဲ စိတ်ထင်ရာ လျှောက်ဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
20/3/09 12:08 PM
မလုလု>> ပန်းပွင့်လေးတွေ ဆွဲလေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ စိတ်ထားနူးညံ့တဲ့သူမှန်း ခန့်မှန်းလို့ ရပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပုံတွေ ဒယ်အိုးဒန်ခွက် ပုံတွေကော မဆွဲဘူးလားဟင် :)
20/3/09 12:39 PM
Doodleအေၾကာင္း က်ေနာ္လည္း စိတ္ဝင္စားတယ္ ။ နည္းနည္းေရးဖူးတယ္ ဘေလာ႕မွာ ။ အထူးသၿဖင္႕ ကေလး ငယ္ေတြေရးတာကို ပိုသေဘာက်တယ္ ။
5/12/11 12:06 AM